एउटा यस्तो समूदाय जहाँ बिहे अघि बच्चा अनिवार्य जन्माउनुपर्ने — Imandarmedia.com
एजेन्सी । बिहे अघि बच्चा ! हाम्रो समाजलाई पचाउन निकै मुस्किल हुने गर्दछ । तर, छिमेकी मुलुक भारतको राजस्थान र गुजरातका एक समुदायमा भने यो रिति रिवाज हो र यसलाई मान्नुपर्छ । पत्याउनुभएन ?
विभिन्न समुदायका आ आफ्ना चालचलन र रिति रिवाज रहेका हुन्छन् । ठाउँ र समुदाय अनुसार फरक फरक हुने रितिरिवाज धेरैलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ । भारत राजस्थान तथा गुजरातमा बसोबास गर्ने गरासिया समुदायमा यस्तो प्रचलन छ ।
यो समुदायमा विवाह गर्ने जोडी विवाह पूर्वसँगै वस्छन् । एक हिसावले भन्दा लिभिङ टुगेदर र बच्चा जन्माउँछन् । त्यसपछि मात्र विवाहको कार्यक्रम हुुन्छ ।
गरासिया समुदायमा सँगै बसेका केटा र केटीबीच लामो समयसँगै वस्दा समेत केटीले बच्चा जन्माइनन् भने उनीहरुको विवाह हुन सक्दैनन् । त्यसपछि उनीहरु छुट्टीन्छन् । र नयाँ जोडीको खोजीमा जुट्छन् । यो परम्परा एक हजार वर्षदेखि चल्दै आ्एको छ ।
यसलाई दापा प्रथा भनिन्छ । त्यतिमात्र होइन, यहाँ हरेक वर्ष ठूलो मेला लाग्छ । मेलामा आएका युवती मन परेमा युवतीलाई भगाउन पनि सकिन्छ । विवाह गरेपछि सन्तान नजन्मिने समस्याबाट समाधान पाउन यस्तो संस्कारको विकास भएको विश्वास गरिन्छ ।